कपिलको बिहेमा भएको थियो यस्तो किस हंगामा - नेपाल समय
कपिलको बिहेमा भएको थियो यस्तो किस हंगामा
मुम्बई – कपिल शर्माका थुप्रै शुभचिन्तक छन्। ‘द कपिल शर्मा सो’ ले उनको लोकप्रियता निकै बढाएको हो। उनी लोकप्रियता कुनै बलिउड स्टार भन्दा कम छैन। उनको सोमा आउन जोखुकै बलिउड स्टार तयार हुन्छन्। कपिलको बड्दो पपुलारिटी बेला बेला उनीमाथि नै भारी हुने गरेको छ। केही दिन पहिले कपिलले आफ्नो शोमा एक फ्यानले आफूलाई जवरजस्ती किस गरेको बताएका थिए।
गत आइबार कपिल ‘द कपिल शर्मा सो’ मा ‘सुपर डान्सर च्याप्टर ३’ का जज शिल्पा शेट्टी कुन्द्रा, गीता कपूर र अनुराग बसु आएका थिए। शोमा कपिलले तीनै जजसँग रमाइलो गरे। यसै क्रममा कपिलले आफ्नो बिहेको एउटा रोचक क्षण सुनाए ।
उनले भने, ‘मेरो बिहेको दिन एक मान्छेले उपस्थित थिए। उनी मेरो प्रत्येक फंसनमा उपस्थित थिए। जब उनी मलाई बिहेको बधाई दिन मेरो नजिक आए उनले मेरो गालामा किस गरिदिए। मलाई थाहा थिएन उनी को हुन्? उनको ब्यवहारले मलाई दिक्क तुल्याएको थियो। मैले उनीलाई सवक सिकाउने साचे बनाए र उनी मेरो नजिक आउने वित्तिकै मैले उनलाई कुहिनाले हिर्काए। त्यसपछि उनले त्यस्तो हर्कत गरेनन्। उनको किस्सा सुनेर कपिलको शोमा उपस्थित सबै हाँसेका थिए।
यसपछि शिल्पा शेट्टीले पनि अनुराग बुसुको हर्कतको बारेमा भनिन्। अनुराग देख्नमा मात्र सीरीयस छन्। तर, उनी खुब मस्ती गर्ने गर्ने स्वभावका छन्। हामीहरुसँग प्राय उनी मजाक गरिरहेका हुन्छन्। शिल्पाले हालै अनुरागले उनको चियामा नुन हालिदिएको र त्यसपछि शिल्पाको फोनबाट उनकी बहिनी शमिता शेट्टीलाई म्यासेज गरिदिएका थिए। उनले म्यासेजमा लेखेका थिए, ‘शिल्पा पेग्रेन्ट छिन।’ यो सुनेर उनकी बहिनी निकै खुसी भएकी थिइन्। तर, पछि मात्र थाहा भयो कि अनुराग उनीसँग मजाक गरिरहेका थिए।
‘यो मन’ बाट उत्साही जोन
पर्यटन वर्ष लक्षित गीत ‘जय जन्मभूमि जय सिन्...
कालीप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध संगीत चोरीको उज...
‘मुटुभित्र तिम्रो’ सार्वजनिक
एसइईकाे नतिजा बुधबार
माइतीघर नियन्‍त्रणमा लिन तीन हजार प्रहरी परिचालन
विप्लव र कमल थापाबीच कनेक्सन !
विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारी टोली नेपालगंजमा, मंगलबार वार्ता
यसकारण अलोकप्रिय हुँदैछन् ओली
क्याबिनेटमा ईश्वरको बेहाल, योगेशलाई मन्त्री फालाफाल
नेकपा प्रदेश १ : कतै पाँच सहइन्चार्ज कतै शुन्य
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति
इसेवामा खाता खोल्नेको संख्या २० लाख नाघ्यो
कर नीतिविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित
यी हुन् नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज (सूचीसहित)
वडा अध्यक्षले दिए आफ्नो वर्षभरीको तलब वृद्धवृद्धालाई
साझा पार्टीले दियो मन्त्रीलाई कोट उपहार
विश्‍वनाथ प्रसाद शाह
समाचार सम्पादक : बालकुमार नेपाल
डेस्क संयोजन : धिरज बस्‍नेत,गोविन्द जोशी, यज्ञराज जोशी
आर्थिक ब्यूरो : शर्मिला ठकुरी
राजनीतिक ब्यूरो : बीपी साह
सुरक्षा /अपराध ब्यूरो : मित्र भण्डारी
खेलकूद ब्यूरो : जितु साउद
सामाजिक ब्यूरो : सनम महर्जन
प्रबिता श्रेष्ठ, निरू मगर, माया पौडेल
अंग्रेजी संस्करण : मातृका पौडेल
मल्टिमिडिया: दयासागर केसी
प्रदेश संयोजक : शिवराज खत्री- ७
देव बहादुर राना- ६
नरेश केसी- ५
विराट अनुपम- १
धैर्यकान्त दत्त- २
मार्केटिङ मेनेजर : युवराज खतिवडा
लेखा / प्रशासन : आकांक्षा ऐरी